लक्का जवान र षट्कोणको कमजोर ओपनिङ हुँदा, हलिउडको आक्रामक Global TV Nepal
लक्का जवान र षट्कोणको कमजोर ओपनिङ हुँदा, हलिउडको आक्रामक
ग्लोवल टि.भी. आइतवार, बैशाख २५, २०७९ 0
वैशाख २५– गत शुक्रबारबाट हलमा लागेको नेपाली कथानक चलचित्र ‘लक्का जवान’ले बक्स अफिसमा कमजोर ओपनिङ गरेको छ।
‘लक्का जवान’ सँगै हलमा लागेको ‘षट्कोण’ले पनि राम्रो कमाइ गर्न सकेन। दुई नेपाली चलचित्र घरेलु बक्स अफिसमा पछारिदा हलिउड सुपरहिरो फिल्म ‘डक्टर स्ट्रेन्ज इन मल्टिभर्स अफ म्याडनेस’ले भने आक्रामक ओपनिङ गरेको छ।
शिवहरी पौड्यालले निर्देशन गरेको चलचित्र ‘लक्का जवान’ले १८ लाख ग्रस कलेक्सन गरेको गोपाल कायस्थले बताए। चनावी माहोलले असर गर्दा चलचित्रले अपेक्षा गरिएअनुसारको ग्रस कलेक्सन गर्न नसकेको कायस्थको भनाइ छ।
राम्रो प्रचारप्रसारसहित प्रदर्शनमा गएको चलचित्रले सोचेजस्तो दर्शक तान्न नसकेपछि निर्वाचनको मारमा परेको भनिएको छ। यो चलचित्रमा हास्य कलाकारको ठूलो भीड देख्न सकिन्छ। फिल्मले समीक्षकको मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ।
कर्मा स्टार ‘षट्कोण’ले दुई दिनमा १० लाख ग्रस कलेक्सन गरेको छ।
उता, बेनेडिक्ट कम्बरब्याच स्टारर ‘डक्टर स्ट्रेन्ज’ले हाउसफुल व्यापार गरेको छ। यो फिल्मको अग्रिम टिकट बुकिङ उच्च देखिएको छ।
छ्ठ पर्वको अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीलाई शुभकामना प्रदान :अध्यक्ष प्रचण्ड
टेनिस स्टार राफायल नाडाललाई उपाधि
जर्मनीमा नेपालीलाई पनि प्रवेशमा खुला
पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री छोडेमा एकता संभव : नेता नेपाल
काँग्रेसले चेतेन : डा. युवराज खतिवडा